Bulshada - Absolut Viajes | Safarka Absolut (Bogga 2)
Cuba iyo asalka magaceeda
Halkee ayuu ka yimaadaa magaca Cuba? Magaceeda asal ahaan? Tani waa su'aasha aan isku dayeyno inaan ku xallino qoraalkan.
The Hispanic-Colombian Alejandro Obregón waxaa loo arkaa mid ka mid ah ranjiyeyaashii waaweynaa ee Isbaanish-Mareykankii qarnigii XNUMXaad.
Horumarka dhaqaale ee Norway
Waxaan sharaxeynaa sababaha horumarka dhaqaalaha Norway, oo hada kamid ah wadamada ugu qanisan aduunka.
Dhaqanka ka jira dalkan qadiimiga ah ee xiisaha badan wuxuu leeyahay tibaaxyo kale oo badan oo ka baxsan Ahraamta. Midkoodna waa tiyaatarka Masar.
10-ka qof ee ugu taajirsan magaalada New York
Maanta waxaan dib u eegeynaa liiska 10-ka qof ee ugu taajirsan New York, oo aan ku helayno in ka badan hal magac oo caan ah.
Quruxda iyo jirka oo kaamil ah Griiga Qadiimiga ah. Iyagu ma isku mid baynu nahay maanta?
Sidee loogu labistaa Switzerland?
Sida loogu labisto Switzerland waa su'aal si fudud looga jawaabi karo. Fashion waa caadi in Europe oo dhan. Waxa u gaarka ah waa dharkiisa caadiga ah.
Waxaan dib u eegeynaa qaanuunka iyo xafiiska shaqada ee looga baahan yahay in lagu guursado Norwey iyo sidoo kale qaar ka mid ah dhaqamada kuxiran ciidaan.
Dhaqanka wax mudidda ee Hindiya
Hindiya waa waddan inta badan daloolinta lagu soo bandhigo dhaqan ahaan. Ma taqaan asalka iyo macnaha dhaqankan? Waan kuu sheegi doonaa!
Nolosha ragga ee Sparta
Spartans waxay ahaayeen halyeeyadii waaweynaa ee Giriiggii hore, laakiin sidee Sparta ahayd, sidee bay ahayd bulshadeeda, haweenkeedu, caadooyinkeeda?
La Pasquetta, oo ah maalinta dheeriga ah ee Talyaanigu u aaso Easter
Dalka Talyaaniga, Isniinta soo socota ee Axadda Easter waxaa loo yaqaan La Pasquetta, taas oo ah, "Easterka yar".
Maalinta Hooyada ee Kanada
Maalinta Hooyada ee Kanada waa fasax aad loo jecel yahay oo la jecel yahay, oo kaliya marka loo eego Kirismaska ​​oo leh muhiimad iyo dabagal.
Maxay yihiin Hamptons-ka Mareykanka
Hamptons-ka Mareykanka waa taxane tuulooyin yaryar iyo magaalooyin ku yaal cirifka bari ee Long Island.
Japan, waa wadanka ugu wasakhda yar adduunka
Japan waa wadanka ugu wasakhda yar adduunka, taas oo keentay tayo sareysa nolosha iyo cimri sare.
Qadaadiicdii hore ee Masar
Daqiiqadaha lacagta birta ah ee 'Ancient Egypt' waa kuwo dhowaan dhow, maaddaama ay ka muuqdaan oo keliya marxaladda ugu dambeysa, ee Ptolemaic Egypt.
In kasta oo horumarka la sameeyay tobanaankii sano ee la soo dhaafay, haweenka Shiinaha ay wali ku sii jiraan meel ka liidata ragga.
Huteelada Cordoba waxay diyaariyaan sanadka cusub
Hoteelada heerka-sare ee caasimada Cordovan ayaa isku diyaarinaya dabaaldega sanadka cusub sanadka oo ay ...
Farqiga u dhexeeya gabdhaha Shiinaha iyo Japan
Ma ogtahay waxa ay ku kala duwan yihiin gabdhaha Shiinaha iyo Japan? halkan waxaan ku sharaxeynaa sida dhaqanka dumarku uga shaqeeyo Shiinaha iyo Japan
Dharka Kuuba, dharka Cuba
Soo ogow waa maxay dharka caadiga ah ee Cuba ee ragga, dumarka iyo waqtiyada kala duwan ee sanadka. Waa maxay dharka Kuubaanka ee dadka Cuba ay xidhaan maalintooda maalin?
Caadooyinka iyo dhaqanka bulshada Iswiidhan
Caadooyinka iyo caadooyinka ka jira dalka Iswiidan aad bay uga duwan yihiin kuweenna, waxaannu ku tusaynaa dhammaan sirta borotokoolka iyo qaababka Iswiidhishka
Xididdada magacyada reer Irish
Waxaan kuu sharraxeynaa xididdada iyo bilowga magacyada reer Irish iyo maxay yihiin magacyada iyo magacyada loogu isticmaalka badan yahay Ireland
Goorma ayaa la xidhayaa saree? Gobolkee ayaa mid waliba ka mid ah dharka Hindida ee caadiga ah? Waxaan kuu soo bandhigeynaa dhammaan sirta dharka Hindida iyo dharka Hinduuga.
Maalinta Dhimashada: xumaanta iyo caqliga 20 eray oo caan ah
Waxaan kuu soo qaadaneynaa 20 oraah oo caan ah oo ku habboon Maalinta Dhimashada, oo ah fasax aad muhiim ugu ah Mexico oo loo dabaaldego 1-da Nofeembar.
14 waxyaalood oo aan lagu sameyn karin Cuba
Liiskan waxaad ku ogaan doontaa mamnuucyada xiisaha badan ee Cuba. Ma ogtahay in Cuba aad u baahan tahay ruqsad gaar ah si aad u disho lo 'aad leedahay.
Sharciyeynta dhillaysiga ee Nederland, waa sida ay tahay
Dhillaysiga ayaa laga sharciyeeyay Nederland Oktoobar 1, 2000 markii xayiraadda laga saaray dhillayaasha tan iyo 1911.
Ilaha tamarta ee Venezuela
Venezuela waa wadan hodan ku ah tamarta la cusboonaysiin karo sida dabaylaha ama laydhadhka cadceeda, laakiin sidoo kale waxay hodan ku tahay tamar aan la cusboonaysiin karin.
Beeraha dabiiciga ah ee Nederland waa waax soo kordheysa
Beeraha dabiiciga ah ee Nederland waa tayo wax soo saar aad u wanaagsan, qiimo fiicanna u leh lacagta iyo qorshaynta saadka iyo isku halaynta.
Diinta iyo ilaahyada Griiga
Poseidon, Zeus walaalkiis, ma daryeelo badda oo keliya, laakiin sidoo kale dhulgariirka iyo fardaha. U qalma…
Meelaha ugu wanaagsan iyo xaafadaha loogu talagalay khaniisiinta iyo ragga iyo dumarka ku nool Amsterdam
Meelaha ku hareeraysan Zeedijk waa mid ka mid ah meelaha soo jiidashada leh ee ugu caansan Amsterdam mahadnaqdeeda dukaanno badan iyo ...
Holland, bulshada hormoodka ka ah korsashada waalidnimada
Nederland waxay horseed u tahay marka la doonayo in la siiyo xuquuqda korsashada dadka isku jinsiga ah ee qaniisiinta ah, bishii Abriil 2001 ayuu sharcigu dhaqan galay, wuxuuna tusaale u yahay dalalka kale.
Nidaamka siyaasadeed ee Griiga
Jamhuuriyadda Hellenic waxay leedahay bed dhan 132.000 kilomitir oo laba jibbaaran. Baddu waxay aad ugu jirtaa Griiga iyo xeebaha ...
Qalliinka balaastiggu waa mid ku soo kordhay Shiinaha
Shiinaha ayaa raacaya Japan iyo Kuuriyada Koofureed iyaga oo adeegsanaya qaab casri ah qalliinnada caagga ah
Muusikada dhaqanka ee Venezuela
Waxaan sahaminaa sirta muusigga ugu dhaqanka Venezuela iyo aaladaha ugu caansan Venezuela. HA KU WAAYEYN heesaha Venezuela.
Sheekooyinka Swan, Kalluunka iyo Carsaanku
Sheekooyinka Swan, Kalluunka iyo Carshiga iyo Waxbariddiisa Ruushka Hore
Halyeeyada Reer Jabaan ee Jaban - Gabadha daloolka ka timid
Gabadha godka ku jirta waa mid ka mid ah halyeeyada reer Japan ee ugu argagaxa badan. Halkan waxaan kuu sheegeynaa waxay ku saabsan tahay.
Sidee tahay dadka ku nool Australia?
Qoraalkan waxaan ku baran doonaa wax yar oo dheeraad ah oo ku saabsan Australia iyo sida Australiyaanka ay yihiin, iyo sidoo kale qaar ka mid ah astaamahooda bulsheed.
Xeerarka anshaxa ee Ruushka
Soo-booqde kasta oo maanka ku haya u safarka Ruushka waa inuu maanka ku hayaa inay tahay waddan ajnabi nacayb cayiman ...
Hippies ee Argentina
Lixdamaadkii ayaa laga yaabaa inay yihiin wax la soo dhaafay, laakiin hippies ma aha. Iyada oo qaab nololeedyo kale oo isku duuban ...
Kabaha Dutch alwaax
Kabaha alwaaxa? Dhaxalka Nederlandka caadiga ah? Waxaa laga yaabaa inuusan jirin hal qof oo ina siin kara hal ...
Dhaqannada Ruushka ee Ivan Kupala
Laga soo bilaabo waqtiyadii hore dhammaan dadka adduunka waxay u dabaaldegeen dhammaadka Juun xilliga xagaaga ugu sarreeya. The…
Barashada Nederland: Jaamacadda Farsamada ee Eindhoven
Ma ka fikireysaa inaad wax ku barato Nederland? Marka laga soo tago ururradeeda dhaqameed ee leh dabaylaha, jiiska iyo waxyaabaha ku xirma, waa ...
Koobka ugu qaalisan ee shaaha Shiinaha lagu isticmaalo adduunka
Bakeeraha Shiinaha ee qadiimiga ah ayaa lagu xaraashaa Hong Kong $ 700
Jaamacadda Farsamada ee Delft
Jaamacadda Delft ee Teknolojiyada waa jaamacad casri ah oo leh dhaqan hodan ah. Sideeda kuliyadood iyo in kabadan 40 ...
Kastamka iyo aadaabta Ruushka
Farqiga udhaxeeya dhaqanka yurub iyo ruushka waa mid aad u weyn oo aad qori karto buugaag badan oo iyaga ku saabsan….
Jaamacadaha Caafimaadka ee ugu Fiican Ruushka
Tacliinta sare ee Ruushka waxay kasbatay sumcad caan ah masraxa adduunka heerarka sare awgood ...
Filimaanta iswiidhishka ugufiican abid
Machadka aflaanta iswiidhishka ayaa hada soo saaray liiska filimada ugu wanaagsan ...
Baro Xiriirka Ruushka
Xiriirka Ruushka ama Ruushka waa waddanka ugu ballaaran adduunka. Wuxuu daboolayaa 1/8th dusha sare ee dhulka ...
Waxbarashada Kanada waa mid aad loo qiimeeyo oo diiradda weyn ay siiso dowladda Kanada. Halka nidaamka ...
Qalabka xariga Ruushka ee hore: Kankles
Kankles waa aalad muusiko xarig ah oo asal ahaan ka soo jeeda Lithuania oo ka soo jeeda qoysaska. Qalabka waa ...
Dadka Nederlandka ah oo sii dheeraanaya oo caafimaad qaba
Celceliska miisaanka ragga iyo dumarka ee Nederland ayaa si dhaqso leh u kordhay labaatankii sano ee la soo dhaafay gudahood ...
Hindisaha Shiinaha Hore
Shiinaha, oo ka mid ah ilbaxnimooyinkii waaweynaa ee soo jireenka ahaa, wuxuu na siiyay dhaxal weyn oo leh hal-abuur badan oo ka mid ah ...
Venezuela, oo ah wadan dhaqamo badan leh
Venezuela waa wadan ku hadla Isbaanishka, waxaana ku nool 25,8 milyan oo qof. Dadka degan dalkan ...
Jinjiang, caasimada kabaha Shiinaha
Waxay ku taal xeebta koonfur-bari ee Shiinaha ee ku taal gobolka Fujian, Jinjiang City waxay ku jirtaa kaalinta koowaad…
Muusikada Cuba iyo saameynta ay ku leedahay adduunka
Muusikada Cuba, ama Afro-Cuban music, ayaa door aad muhiim u ah ku leh saameynta muusikada adduunka iyo sidoo kale ...
Caadooyinka wanaagsan ee Holland
Bulshada Nederland waa sinnaan iyo casri. Dadku waa kuwo suubban, dulqaad badan, madaxbannaan, isku filan, oo ganacsade ah. Waxay qiimeeyaan waxbarashada, ...
Boqortooyada Inca ee xoogga badan
Incas waxay ilbaxnimo ka ahaayeen Koonfurta Ameerika oo qarnigii 14aad ay ahaayeen qabiil yar oo ka mid ah ...
Awoowayaasha Incas waxay ahaayeen ugaarsato ka yimid Aasiya oo ka tallaabaya marinka Bering. In ka badan 20.000 oo sano ...
Dharka hoose ee Shiinaha hore
Dharka Shiinaha ee waqtiyadii hore
Xirfadaha dhaqameed ee Ruushka
Xirfadaha Ruushku waa qeyb ka mid ah dhaqanka dadkooda farshaxankoodu u sii dhiibanayay jiilba jiil….
Qaabka nolosha Australia
Ragga fardooleyda ah ee reer Mangool
Taariikh kooban oo dadka Mongolia ah, Shiinaha
Magaalooyinka waaweyn ee casriga ah ee Shiinaha
Shiinaha wuxuu leeyahay magaalooyin casri ah oo firfircoon oo ka dhex muuqda Aasiya qarniga 21aad.
Waxay ku taalaa plateau ku teedsan xeebta waqooyi ee Koonfurta Ameerika, caasimada Venezuela, ...
Magaalooyinka ugu wanaagsan ee Ruushka ku noolaada kuna shaqeeya
Sida lagu sheegay daraasad ay sameysay shirkadda Mercer, oo u heellan qiimeynta magaalooyinka adduunka iyadoo raadineysa kuwa ...
Naqshadeynta casriga ee Dutch
Naqshadeynta casriga ee Bariga Docklands, Amsterdam Sanadihii ugu dambeeyay ee 15, Holland waxay noqotay mid ka mid ah ...
Qaab dhismeedka Sweden
Iswiidhan, waddanka kaymaha iyo harooyinka, sidoo kale waxay leedahay magaalooyin mashquul badan oo naqshadeynta qaab-dhismeedka isku dhafan ...
Dhaqamada kirismaska ​​ee Ruushka
Waqtiyadii Midowgii Soofiyeeti, Kirismaska ​​aad looma xusin. Kaliya sanadka cusub ayaa ahaa waqtiga ...
Qalabka muusikada Ruushka
Balalaika Waa aalad muusiko xadhig leh oo caan ku ah Ruushka, oo leh muuqaal saddex geesood leh iyo saddex xadhig. The…
Qoob-ka-ciyaarka dhaqanka ee reer Ruushku waa mid ballaadhan oo kala duwan sida qaranka laftiisa. Inkastoo ajaanibta badankood ...
Qoob ka ciyaarka hiddaha iyo dhaqanka Ruushka: Kamarinskaya
Kamarinskaya waa qoob-ka-ciyaarka dhaqanka ee Ruushka, kaas oo si fiican loogu yaqaan maanta inuu yahay halabuurka reer Ruushka ...
Ciidaha waaweyn ee Masar
Masar waa wadan carbeed oo layaableh oo xaflado iyo dabaal degyo badan leh. Qaarkood waa taariikhi, kuwa kalena waa xaflado farshaxan casri ah iyo ...
Caadooyinka Shiinaha: Bandhigga Dayrta-Dhexe
Mid ka mid ah ciidaha dhaqameed ee Shiinaha oo dhan oo laga xuso maalinta shan iyo tobnaad ee bisha siddeedaad ee kalandarka dayaxa, ...
Gitaarka Cuban-dhaqameedyada: maraakiibta Cuba
Waxa ugu horreeya ee laga fahmo maraakiibta Cuba waa inay tahay qalab laxan ah. In kastoo ay umuuqato ...
Naago naagihiisa ah oo u dhalatay Shiinaha
Naago iyo naagood naagihi hore ee Shiinaha
Jute, kuwii ugu horreeyay ee dejiya Jutland
Juttu waxay ka mid yihiin dadyowgii ugu horreeyay ee Jarmal ah ee qabsaday aagga Danmark maanta. Sida ku xusan qoraalada ...
Sidee loo sameeyaa caruusadaha Ruushka?
Waxay qaadataa xirfad badan in la sameeyo jaangooyo caruusadeed oo Ruush ah. Dhaqan ahaan, caruusadaha matryoshka waxaa loo sameeyay ...
Lao Zi wuxuu ahaa abuuraha Taoism kaas oo loogu magac daray Li Er, iyadoo Dan loogu magac daray. Wuxuu ahaa mufakir ...
Cagaar iyo dahab, midabada qaranka Australia
midabada qaranka ee Australia
Dharka dhaqameed ee Jarmalka: Lederhosen iyo Tracht
In kasta oo Jarmalku waligiis uusan si muuqata ugu soo bandhigin moodada, dharka dadkiisa iyo dhar dhaqameedka waa lagu riyaaqaa iyada oo aan ...
Sidee yihiin aroosyada Ruushka?
Aroosyada Ruushka ayaa si weyn loogu dabaaldegaa. Baaxadda dabaaldegga iyo dhammaystirka diyaarinta kaliya ...
Waxyaabaha qaar ka xumaada Jabbaan
Ajnabi badan oo u safraya Japan markii ugu horreysay waa inay isku dayaan inay taxaddar badan muujiyaan, maxaa yeelay Jabbaanku aad ayey ...
Maalinta Carruurta ee Cuba
Waxaan aaminsanahay in dhibaatada adduunka iyo xayiraadaha boqortooyadu midkoodna weligiis ka tirtiri doonin qosolka ...
Ruushka, astaamaheeda iyo taariikhdiisa
Dal waliba wuxuu leeyahay astaamo qaran sida heesta calanka iyo calanka. Ruushku wuxuu leeyahay astaan ​​ah ...
Codbixiyaasha Holland: Beemster
Muuqaalka hal abuurnimada iyo caqliga caqliga leh ee Beemster Polder maanta wuxuu saameyn qoto dheer oo waara ku yeeshay mashaariicda ...
Wadamada Waqooyiga Ameerika sida Kanada ama USA, Maalinta Hooyada waa xaflad loo ...
Maalinta Hooyada ee Switzerland
Switzerland gudaheeda, Maalinta Hooyada waxaa loo dabaaldegaa Axad walba oo bisha May ah waxaana loo arkaa ...
Maalinta Shaqaalaha ee Japan
Maalinta May waa mid ka mid ah taariikhaha inta badan dalalka adduunka ay u xusaan Maalinta ...
In yar iyo in yar oo ka mid ah gabdho iskuuley ah oo reer Japan ah ayaa xirta dharka lebbiska u eg
In yar iyo in yar oo ka mid ah gabdhihii iskuulada ee reer Japan ayaa xiran dharka lebiska badmaaxa, oo sidoo kale loo yaqaan "Sailor Fuku."
Rothenburg, magaalada sheeko xariirka ee Pinocchio ku nool yahay
Jarmalka wuxuu leeyahay muuqaallo riyooyin ah oo noqda goobo aan caadi ahayn dhammaan noocyada filimaanta. Sidaas Rothenburg, oo ah qadiim ah ...
Australiya ma leedahay dhar dhaqameed?
Qiimaha nolosha ee Havana
Si aad u bilawdo, waxaa jira nidaam laba jibbaar oo lacag bixin ah iyo qiimayaal. Reer Cuba waa inay ku bixiyaan lacagtooda si ay ugu iibsadaan ...
Magaalada Chinatown ee Sydney, tan ugu weyn Australia
Shiinuhu waa malaayiin iyo malaayiin dalkooda ku nool laakiin waxay ka mid yihiin bulshooyinka u haajiray kuwa ugu badan ...
Dhillaysiga ayaa ku kora Australia
Dhillaysiga ayaa ka weyn adduunka. Dhinac, waa shaqo aan u baahnayn wax diyaarin aqooneed ...
Siberia, ama sidoo kale Waqooyiga Aasiya, Waqooyiga Aasiya ama Waqooyiga Aasiya, waa qaybta Bariga Aasiya ee Ruushka, a
Maalinta Caalamiga ee Haweenka ee Cuba
Maalinta Haweenka Adduunka waxaa laga xusaa Cuba 8-da Maarso sida waddamada badankood ...
Jacayl sida ay qabaan Shiineeska iyo Shiinaha
Warbixinta sahankii ugu dambeeyay ee 2011-2012 ee Qiimaha Shiinaha ee Jacaylka iyo Guurka ayaa lagu daabacay Shiinaha ...
Guryaha bogsashada ee dabocase Shiinaha
Waxaa jira khudaar badan oo leh bogsiin iyo astaamo waxtar u leh jirka aadanaha. Iyo, inta lagu jiro xilliga qaboobaha, Shiinaha, ...
Taariikhda kubbadda baseball ee Cuba
Kubadda baseball-ka ee Cuba isboorti ahaan waxay asal ahaan ka soo jeeddaa ciyaarta Batos oo ay reer Aborigine-ka u ciyaari jireen, ...
Ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee Ruushka
Ivan the Terror, oo ah caaqil caan ku ah dabeecaddiisa daran iyo jacaylka farshaxanka, waxay noqotay wax iska caadi ah in la yeesho ...
Isboortiga asalka ah ee Ruushka
Isboortiga Ruushka waxaa ka buuxa waxyaabo lama filaan ah: Tartamada Troika waxaa loogu talagalay inay helaan aqoonsi inay ka mid noqdaan ...
Si kastaba ha noqotee, Venezuela waxay leedahay guryo miyi ah oo ku yaal bannaanka, gobolka Andes, iyo Guyanas massif, oo matalaya hab nololeedka beeraha, oo qaab nololeedkiisu aad uga duwan yahay magaalooyinka magaalooyinka Venezuela iyo caasimaddiisa Caracas, maadaama ay leeyihiin wax badan istiraatiijiyad nolol-dhaqameed. Soo-galootiga dhowaan soo qulqulaya ee ka yimid Venezuela iyo dibaddaba waxay saameyn ku yeesheen muuqaalka magaalooyinka gobolladaas, gaar ahaan magaalooyinka miyiga ah.
Qaabka dowladda Kanada
Nidaamka dowliga ah ee Kanada waa boqortooyo dimoqraadi ah oo dimoqraadi ah oo leh Madaxa Gobolka iyo ...
The Red Light District of Amsterdam, oo ka mid ah saddexda ugu caansan adduunka
Red Light District, ama degmada caanka ah ee loo yaqaan Red Light ee dadka aan horey u aqoonba, waa xaafad ku taal Amsterdam oo caan ku ah ...
Haweenka Shiinaha ugu awooda badan
Ma haysataa wax qalab ah oo ka socda shirkadda teknolojiyadda Huawei gurigaaga? Hagaag, maamulaha guud ee shirkadan, agaasimaha guud ...
Halloween ee Kanada
Halloween waxaa looga dabaaldegaa Kanada 31 Oktoobar. Waa maalin loo dabaaldego habeenka kaliya sanadka ...
The Hakka, oo ah qowmiyad Shiinees ah oo layaableh
Shiinaha wuxuu ka kooban yahay qowmiyado badan inkasta oo aqlabiyaddu tahay qowmiyadda Han, haddana waxaa jira kuwo kale oo badan. Qaarkood ayaa urursan ...
Waxbarashada iyo barnaamijyada bulshada ee miyiga Shiinaha
Ku noolaanshaha buuraha ayaa ka fog nolosha magaalada iyo raaxeeda. Shiinaha runtii waa waddan weyn oo ...
Holland oo ka mid ah 10ka dal ee adduunka ugu qosolka badan
Nederlandku waxay kujireen tobanka wadan ee aduunka ugu qosolka badan, sida laga soo xigtay codbixin dhowaan la sameeyay. Mareykanka ayaa u codeeyay ...
Nasiib darrose takoor ayaa ka jira dhammaan qaybaha adduunka. Waxaa jiray, jiray oo aan ka shakisanahay inaysan jirin ...
Japan, waa dhul dhulgariir
Xarumaha dalxiis ee ugu muhiimsan Kanada
Kanada waa mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee loo doorto fasaxyada Waqooyiga Ameerika in kasta oo ay ...
Shiinaha, uurka dhalinta badan iyo waxbarashada galmada
Uurka dhalintu waa dhibaato casri ah oo aan ogayn xuduud. Xaqiiqdii waxaad ku aragtaa dalkaaga oo dhan ...
Qoysas aad u tiro badan oo ku nool Shiinaha, saboolnimo
Shiinuhu ma rabaan qoysas caruur badan leh inkasta oo kooxahan qoysaska ka reebban yihiin xeerka ...
Kubadda baseball ee Kanada
Baseball waa mid ka mid ah isboortiga xirfadleyda ah ee ay doorteen reer Kanada, maadaama ay la socdaan xeegada barafka ay yihiin ...
Dhibaatooyin bulsheed oo halis ah Filibiin
Mid ka mid ah dhibaatooyinka halista ah ee ku soo food leh Filibiin muddooyinkii ugu dambeeyay waxay si xoogan ula xiriirtaa ururka maamulka siyaasadeed
Cidnimada Talyaaniga, maado dhan
Kahadalka sharafta talyaaniga waa waxyar oo firidhsan maxaa yeelay waa in laxasuustaa in xitaa mideynta hal ...
London xitaa waardiyayaashu waa soo jiidasho
Dhaqangelinta sharciga London sidoo kale waa goob dalxiis. Laga soo bilaabo kuwa wax cuna, kuwa ilaaliya Tower-ka London, iyada oo loo sii marayo ilaalada boqortooyada oo leh koofiyadooda qaaska ah, ilaa booliska maxalliga ah, ee loo yaqaan bobbies, dalxiise kasta oo is ixtiraama waxaa lagu sawiri doonaa midkood.
Maxay yihiin shirkadaha ugu fiican ee ka shaqeeya Hindiya? (Qaybta 2)
Waxaan sii wadaynaa inaan la kulanno shirkadaha ugu fiican ee ka shaqeeya Hindiya. Aynu ku bilowno markan annagoo sheegayna Tata Consultancy ...
Winfield, sigaarka lambarka 1aad ee Australia
Suuqa sigaarka ee Australiya waxaa ku yaal astaan ​​hormuud ah oo jirtay ilaa horaantii 70-meeyadii….
Victor Emmanuel II, oo ahaa boqorkii ugu horreeyay ee Talyaaniga
Xaafaddayda dhexdeeda waxaa ku yaal waddo la yiraahdo Victor Manuel II iyo sababta oo ah waxaan ahay qof xiiso badan oo aan aad u jeclahay ...
Jacaylka ee Kanada
Maalinta Jacaylka waxaa si xamaasad leh looga xusaa Kanada. Dadka oo dhan waxay muujiyaan jacaylka xaasaskooda ...
Dhibaatooyinka dhaqaale ee ka jira Australia masiibooyinka dabiiciga ah awgood
Haddii aad qorsheyneyso inaad u shaqo tagto Australia ama xoogaa dalxiis ah, dalxiis badh, badh ayaa loo tuuraa kalluunka qaar ...
Baraha bulshada ee Australia
Markan waxaan ka hadlaynaa joogitaanka shabakadaha bulshadaº Australia. Aynu bilowno adoo sheegaya in Australia ay hogaamiso ...
Warbaahinta Bulshada ee Hindiya
Shaki kuma jiro in shabakadaha bulshada ay isbeddel ku sameeyeen adduunka, oo ay ku jiraan adduunka fog ee Hinduuga, waana tan ...
Xaaladda uurka iyo dhalmada ee Hindiya
Haweeney kasta oo uur leh waxay si buuxda u ogtahay in dhammaadka sagaalka bilood ee uurku sida caadiga ah ku dhammaado ay tahay ...
Waxbarashada galmada ee Shiinaha, mowduuc dhan
Dhowr iyo toban sano ka hor haweenku waxay waayi jireen bikradnimadooda habeenka arooskooda. Nolosha galmada waxay ahayd taranka ...
Masaafurinta Cuba iyo dadka caanka ah
Intii uusan Fidel sameyn kacaankiisa, Cuba aad ayey uga duwaneyd tan aan maanta naqaan. Waxay ku fiicnayd qaar ...
Cologne: sudh qufulka webiga Rhine kuna dhawaaq jacaylkaaga weligiis ah
Sida Pont das Arts ee Paris, dadka jecel waxay jacaylkooda ku xirtaan iyagoo xirxiraya qufulka furayashana tuuraya furaha ...
Dhaxalka Policarpa Salavarrieta
Sannadka laba-sanolaha ah ee Madax-bannaanida Kolombiya, waxaa habboon in la xusuusto mid ka mid ah halyeeyada ugu waaweyn, Policarpa ...
Kahor intaanan si kooban uga hadlin warbaahinta Shiinaha, qofku waa inuu maskaxda ku hayaa wax aad inbadan maskaxda ugu haya: kuma jirno ...
Kanada waxay dalbaneysaa shaqaale beeraha
Sannad kasta tirada shaqsiyaadka asal ahaan ka soo jeeda Guatemala ee yimaada waddamada warshadaha sida Kanada ayaa si tartiib tartiib ah u kordheysa ...
Qipao: qaabka dharka Shanghai
Qipao (cheongsam) waa dharka dumarka ee leh astaamaha Shiinaha waxayna ku raaxeysaneysaa sumcadda adduunka ku sii kordheysa ...
Guryaha waaweyn ee dadka caanka ah ee ku nool Miami
Waxaan horeyba kuugu sheegnay dhowr jeer oo ku saabsan racfaanka weyn ee ay Miami u leedahay qaar ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ...
Maalinta Aabbaha Shiinaha
Axada soo socota Maalinta Aabbaha waxaa laga xusaa 55 wadan oo adduunka ah Shiinuhuna waa ...
Hababka ka hortagga uurka, ragga Shiinaha kama qeyb galaan
Shiinaha waa mid ka mid ah dalalka ugu tirada badan adduunka. Malaayiin iyo milyan ayaa ku nool dhulkeeda ...
Han, waa qowmiyadda ugu tirada badan adduunka
Qowmiyada ugu badan Shiinaha iyo tan ugu weyn adduunka waa qowmiyada Han. 92% ...
Jaime García Serrano, oo ah aqoonyahan xisaabeed oo reer Colombia ah
Xaqiiqdii magaca Jaime García Serrano si fiican looma yaqaan aqlabiyadda reer Colombia, laakiin waa ...
Tilmaamaha loogu talagalay dadka safarka ku tagaya Japan (II)
Tilmaamaha Socdaalka Ardayda Ardeyda mararka qaar waxay ka helaan qiimo dhimis madxafyada, inkasta oo mararka qaar qiima dhimis la heli karo oo kaliya ...
Maalinta Shaqaalaha ee Shiinaha
Maalinta Shaqaalaha waa maalin fasax sanadle ah oo adduunka oo dhan looga xuso dhaqdhaqaaqa ...
Maalinta Shaqaalaha ee Kanada
Maalinta Shaqaalaha ee Kanada waxaa looga dabaaldegay Isniinta ugu horreysa Sebtember dalka Kanada illaa 1880. Asalka of
Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Talyaaniga, ee loogu talagalay Dolce & Gabanna
Ku sii wadida khilaafaadka ka jira Talyaaniga kadib warbixinno ku saabsan xadgudub galmo oo ay sameeyeen xubnaha ...
Sharci ahaanshaha dhillaysiga ee Yurub way ku kala duwan tahay waddammada. Wadamada qaarkood ficilku wuxuu ka baxsan yahay sharciga ...
Dhillaysiga ayaa sharci ka ah Nederland, Amsterdam dhexdeeda inta badanna waxay ku urursan tahay degmada Red Light halkaas oo ...
Shaqooyinka dalxiiska ee Australia
Sida la ogsoon yahay, dalxiisku waa waxqabad caan ka ah maanta, maalin kasta waddan kasta oo adduunka ah ...
Lisbon ma magaalo ammaan ah?
Arrinta amniga bulshada waa wax dhammaanteen na wada walwalsan, mana jiro magaalo adduunka laga reebay ...
Warbixin ku saabsan isbitaalada Lisbon.
Markii aan booqaneyno goob cusub waxaan marwalba iskudayaynaa inaan iska wargalino meelaha dalxiiska iyo meelaha xiisaha leh ee booqashada. Maanta, si kastaba ha noqotee, ...
Samovar, shaaha Ruushka
Samovar wuxuu u adeegi jiray shaah Ruush ah ilaa bartamihii 1700. 1800, samovar wuxuu ahaa ...
Sandwich-ka Cuba waa kala duwanaanta ham iyo farmaajo oo markii hore ay abuureen shaqaalaha Cuba, Cuba ama ...
Shiinaha, guuritaanka gudaha ee miyiga ilaa magaalada
Shiinaha waa wadan aad u baaxad weyn oo leh magaalooyin badan iyo dhul beereed badan. Mid ka mid ah dhibaatooyinka dhaqaale iyo bulsho ...
Aktarada ugu caansan Shiinaha ee adduunka, Gong Li
Markii ugu horreysay waxaan haweeneydan kula kulmay filimka Xaasaska iyo Naagagga, sannado badan ka hor. Waa inay noqotaa ...
Warshada Toyota ee Tahara
Tahara waa magaalo warshadeed oo ku taal Aichi, oo la aasaasay Ogosto 20, 2003 taas oo ka dhalatay isku biirkii Akabane ...
14-ka bishaan Febraayo waxaa looga dabaaldegaa maalinta Jacaylka adduunka oo dhan iyo Kanada maahan ...
Daryeelka Deegaanka ee New York
Haddii qofku u arko in Mareykanku ka mid yahay waddamada soo saara gaasaska ugu badan ee wasakhowda badan, New York, ...
Caadooyinka Nolol Maalmeedka Australia
Australia waxay aduunka kagajirtaa inay kamid tahay wadamada ay muwaadiniinteedu muujiyaan darajo sare ...
Dhoofinta Filibiin Sare
Marka la eego dhoofinta, Filibiin waa waddan leh awood dhaqaale oo dhexdhexaad ah, oo xiriir ganacsi la leh inta badan Mareykanka, Japan, Hong Kong, Boqortooyada Ingiriiska, Netherlands iyo Taiwan.
Paticruzado, Guriga Cabitaanada ee Santiago de Cuba
Shaki kuma jiro in rumanka Cuba uu ka mid yahay kuwa adduunka ugu caansan uguna magaca badan. Ma jiro qof ...
Ubaxa Jamaica ee Cuba
Waxaa jira ubax yar oo midab casaan daran leh oo hadda ku faafaya beero iyo geedo Jasiiraddii ...
Booqo Masaajidka Padre Pio
Padre Pio Chapel wuxuu ku yaal magaalada San Giovanni Rotondo, koonfurta Talyaaniga, waana ...
Ku biirinta Carlos Vives ee muusikada Colombia
Mid ka mid ah fannaaniinta loogu jecel yahay uguna xiisaha badan yahay waddanka Kolombiya waa Carlos Vives, tayadiisa iyo soo jiidashadiisa ayaa isaga ka dhigtay ...
Ogaanshaha luqadda Cuba
Hantida ku jirta luuqada Isbaanishka ee la yaqaan waa in qarniyo badan ay dadku la qabsadeen ...
Ciyaaraha London (II)
Ku sii wadida hawshan si aad u jecel oo ay u dhaqmaan reer London, waxaan kuu sheegayaa inta ...
Kooxaha qowmiyadaha iyo dharkooda
Shiinaha, oo ah waddan leh 56 jinsiyadood, wuxuu leeyahay qaab labbiska u gaarka ah iyo sidoo kale qurxinta loogu talagalay ...
CARICOM waa urur goboleed doonaya is dhexgalka dhamaan wadamada ka kooban. Waa…
Dharka caadiga ah ee Cossacks-ka
Waa mid ka mid ah dadyowga aan inta badan aqoonsanno dadka Ruushka: Cossacks; midkood ...
Waxaan kuu soo bandhigeynaa muuqaal qoob-ka-ciyaarka iyo qoob-ka-ciyaarka ah ee dadka loo yaqaan 'Cossacks', oo ah kun sano jir qowmiyadda reer guuraaga ah iyo ...
Bon Odori, qoob ka ciyaarka dhaqanka
Bon Odori waa ciyaar dhaqameed Jabaaniis ah, waa mida loo cayaaro qoob ka ciyaarka habeenkii, maadaama ay ...
Mid ka mid ah dadyowgii hore ee Shiinaha waa Miao. In ka badan kala badh ayaa ku nool Gobolka ...
Bian Que, aabaha daawo dhaqameedka
Shaki la'aan, daawada dhaqameed ee Shiinaha waxay leedahay taariikh kun sano ah. Qarniyadan, shaqsiyaad badan ayaa lagu kala soocay, yaa sameeyay ...
Algonquinos, dadka hooyo
Algonquians waa dad u dhashay Kanada oo ku hadla qaar ka mid ah luqadaha Algonquian. Dhaqan ahaan iyo luqad ahaanba, waxay isku dhowyihiin ...
Taariikhda Cuba dhexdeeda, qalabka muusiggu wuxuu taagan yahay, oo ka bilaabmaya aasaaskiisa aasaaskiisa ...
Maalinta Victoria - Maalinta Victoria I
Iiddii boqoradda Victoria waxaa looga dabaaldegaa Kanada 24-ka Maajo, kahor dhammaadka Maajo, si sharaf ...
Baltika, biirka Ruushka
Beerta Baltika waa biir dhaqameed Ruush ah, waa biirka isticmaalkiisu ka sarreeyo kuwa kale ...
Maalinta Hooyada Shiinaha
Mid ka mid ah taariikhaha soo jireenka ah ee dalal dhowr ah waa Maalinta Hooyada, oo la xuso bisha ...
Waa maxay Tasajo?
Guruubyada kaladuwan ee Cuba waxaa ku jira saxan dhaqameed loo yaqaan "Tasajo", oo asalkiisu ka soo bilaabmay qarnigii 1700-1800 markii ...
Yangge, qoob ka ciyaar hore
Yangge waa qoob-ka-ciyaarka caanka ah ee miyiga Shiinaha. Waxaa alifay dadku inay ...
Gacanka Labada Dhinac
Gacanka Bothnia waa gacanka ku yaal galbeedka Finland iyo bariga Iswiidhan. Dusha sare ...
Dhadhan: Xaaladda Bulsheed ama Takoorida Hindiya?
Horaan uga wada hadalnay arinta murugsan ee jilayaasha Hindiya. Waxaan cusbooneysiineynaa xusuustaada waxaanan kuu sheegeynaa waxaan ogahay ...
Dhadhanka Hindu iyo Brahmins
Ma jeclaan lahayd inaad wax yar ka ogaato abaabulka bulshada ee Hindiya? Hagaag aan ku bilowno adigoo dhahaya ...
Ericsson, taariikhda iyo farsamada
Ericsson (magaca buuxa Telefonaktiebolaget LM Ericsson) waa shirkad caalami ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Iswiidan oo u heellan bixinta qalab iyo xalal loogu talagalay ...
Trepak, qoob ka ciyaarka Ruushka
Trepak waa qoob ka ciyaarka Ruushka oo lagu garto inay muujineyso awood aad u fara badan isla markaana ka dalbaneyso adkeysi xaasidnimo kuwa dheesha. Muusig ahaan, ...
Kazakhs, qowmiyadda Ruushka
Kazakhstan waa dad asal ahaan kasoo jeeda Turkida kuna nool aaga Kazakhstan. Waagii hore waxay caan ku ahaayeen ...
Hilib qasacadaysan, dhadhan iyo dhaqan
Iswidhan gudaheeda, waxaa ka jira saxan aysan iswiidhishka oo dhami cunin, laakiin, in kasta oo ay jiraan, haddana saxankaas wuxuu ...
Ciyaaruhu wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa bulshada Nederland. Inta lagu guda jiro Ciyaaraha Olombikada, Horyaalada Yurub ama ...
Isboortiga Shiinaha (II)
Ciyaaraha dhaqanka iyo isboortiga Shiinaha waa: wushu, taijiquan, qigong, qaabka shiinaha ee gacan ku gacan qaadka, chesska Shiinaha, ...
Madonnina, sumadda Milan
Madonnina waa taallo dhalaalaysa oo naxaas ah oo Giuseppe Perego ah oo metelaysa 'Virgin Assunta', oo taariikhdeedu ahayd 1774 ...
Chavín, dhaqanka waalidka ee Peru
Dhaqanka Chavín wuxuu matalaa dhaqanka waalidka ee reer Peru. Waxay u dhigantaa daqiiqaddii ugu horreysay ee midaynta dhaqammada ...
The Monolithic Lanzon
Sandeel halbeega halbeegga ah, shan mitir sare, waa muuqaal bahal anthropomorphic ah oo umuuqda inuu matalayo ...
Chancay, magaalo diimeed
Tixraaca degdegga ah ee Toddobaadka Quduuska ah ee Peru waa Ayacucho ama Tarma. Si kastaba ha noqotee, magaalooyin kala duwan sida Chancay ...
Qowmiyada Han waa qowmiyadaha ugu tirada badan Shiinaha, iyo sidoo kale adduunka. Ku saabsan ...
Qasriga Jiilaalka ee Saint Petersburg
Qasriga Jiilaalku waa dhismaha ugu weyn ee Matxafka Heritage ee Saint Petersburg. Waxaa la dhisay intii u dhaxeysay 1754 ...
Ogosto waa bisha ay ugu jecel yihiin iswidhishku inay guursadaan. Waddan sheeganaaya inuu diinta ku cusub yahay, ...
Beer ku yaal Holland
Beer waa cabitaanka ugu jecel dadka reer Holland. Kuwa ugu caansan dhammaan biirka waa hooyo ...
Caadooyinka iyo dhaqanka bulshada Mexico
Dalxiisayaasha safarrada ku tagay Mexico ayaa la yaabay caadooyinka qaar ee ay bulshada leedahay iyo goorta ...
Tilak, bar ee Hindusku wejiga ku xidho (Qaybta 1)
Haddii ay jirto calaamad aan si otomaatig ah ugu garan karno dhaqanka Hinduuga, waa dhibic casaan yar oo ...
Jarmalka dhexdiisa, in ka badan 150 nooc oo farmaajo ah ayaa la soo saaray oo leh astaamaha gobolka ay ka soo jeedaan. Jarmalka kaliya maahan ...
Joogitaanka Aasiya ee Australia
Intaad socod ku dhex marayso magaalo ku taal Australia, layaabi meysid joogitaanka Aasiyaanka ee waddooyinka, xarumaha ...
Kagura, qoob ka ciyaarka ilaahyada
Diinta Shinto ee Japan gudaheeda, waxay muujineysaa qoob ka ciyaarkooda. Midkoodna waxaa lagu magacaabaa Kagura, oo ...
Sinkuy, qoob ka ciyaarka Incas
Caadooyinka bulshada Japan
Qaar badan oo ka mid ah dalxiisayaasha safaro ku tagay Japan, ayaa la yaabay caadooyinkeeda iyo dhaqammo badan, gaar ahaan ...
Da'da ugu yar ee khamri lagu cabi karo Iswiidhan
Da'dee ayaad khamri ku cabbi kartaa baarka iswiidhishka? Tani waa su'aal ay dad badani hubaal weydiin doonaan, ...
Dabaaldegu waa qoob ka ciyaar dareen leh oo leh lilil iyo laxan farxad leh, waxay noqon kartaa tartan ama tartan u dhexeeya qoob ka ciyaarka….
- Kalluumeysiga Danmark waa janno kalluumeysato. Ruqsad looma baahna kalluumeysiga shaqsiyeed. Waxaad u baahan tahay oo keliya ...
Ma jiro wax kaamil ah, taasi way cadahay. Hal nooc oo kala soocid waa kala soocida dadka oo ku xir a ...
Dhammaan qaybaha adduunka waa wax caadi ah in la arko noocyo kala duwan oo buskud ah iyo Ireland maahan mid ka reeban, tan ...
Dhaqanka iyo Bulshada Hindiya
Hindiya waxay ku taal gobolka Koonfurta Aasiya waxayna degtaa inta badan qaaradaha Hindiya. Isaga oo ...
Mongolia waxaa ku nool 2.830.000, oo ku dhowaad saddex meelood meel (960.000) ay ku nool yihiin caasimadda, Ulaanbaatar. Guud ahaan, ku dhowaad ...
Ceelka loo yaqaan 'Dragon Well' wuxuu ku yaal Fenghuangling, (oo u dhow West Lake), oo ka sii gudbaya tuulada Longjing. Waqtiyadii hore, ...
Guryo yaryar oo ku yaal Japan
Dhamaanteen waan ognahay in xaalada guryaha ee Japan ay tahay mid aad khatar u ah macnaha dhulka loo baahan yahay in la dhiso ...
Dadka degan Hindiya, dadka caadooyinka iyo dhaqamada
Laga soo bilaabo waddan sida Hindiya ah waxaan soo bandhigi karnaa waxyaabo badan, laakiin dhexdooda waxaan ka heli karnaa dadka deggan, kuwaas oo runtii ...
Saboolnimada Hindiya, dhinaca kale ee lacagta
Dhamaanteen waan ognahay sida loola dhacsan yahay mucjisooyinka taalladaha Hindiya, xeebaheeda, cunnadeeda wanaagsan, laakiin mararka qaarkood waxaa jira ...
Beeraha qaxwada Faransiiska ee Cuba
Qarniyo ka hor, markii sonkorta aysan ahayn wax soo saarka ugu muhiimsan Cuba, jasiiradda waxay la kulantay koror ...
Jineteras iyo pingueros
Shalay waxaan daawanayay filim telefishan ah oo ka hadlaya dhillaysiga Kaaribiyaanka, rag iyo dumar. Waa dhacdo socota ...
Aborijin Australiyaan ah
Australia waa wadan-qaarad ah 4.000 km inkasta oo laga tixgeliyey helitaankeeda inay tahay dhul aan loo dulqaadan karin ...
Tayada nolosha Cuba
Warshadaha dalxiisku waxay raacaan mabda'a aasaasiga ah ee nidaamka caafimaadka Cuba: caafimaadku waa xuquuqda dadka iyo ...
Heesta calanka Sweden iyo ereyadeeda
Kanada iyo jawigeeda ganacsi
Marka la tixgeliyo, Kanada, oo ah mid ka mid ah waddamada ugu xasiloon adduunka, iyada oo ay ugu wacan tahay siyaasadda dhaqaale ee la hirgeliyey, waxay gacan ka geysatey ...
Astaanta Qaranka ee Kanada waa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan adduunka. Tani waxay ka dhigan tahay waddan loo qaybiyay ...
Kanada iyo teknolojiyada macluumaadka
Bulshada macluumaadka marwalba way isbedeleysaa. Hadda dalalku waxay ku dagaalamayaan cidda bixisa horumarka tikniyoolajiyadda….
Ciidaha iyo ciidaha iswiidhishka
Dhaqanka dadka Suceco gudaheeda, xafladaha iyo dabaaldegyadoodu waxay muuqdaan sanadka oo dhan. Waa wax cajiib ah ...
Halkan waxaad ka heli kartaa sawirro godad kala duwan oo matalaya ugaadhsiga qadiimiga ah ee Andes. Foomkan oo ah ...
Rooti Swedish ah
Meelkasta oo miiska cuntada lagu cuno maahan qaab iswiidhish rasmi ahaan, gaar ahaan rootiga rootiga….
Maxay dumarka u safraya Australia maskaxda ku hayaan
Haween ahaanshuhu lamid ma aha inaad tahay nin marka aad ka fekerto fasax oo boorsadaadu garabkaaga ku jirto….
Digaag la shiilay, cuntada Homer
Imisa jeer ayaan ku aragnay filimada ama Homer Simpson qudhiisu baaldi buu ka cunaa baalal digaag la shiilay….
Akadeemiyada Farshaxanka ee Saint Petersburg
Akadeemiyada Imperial ee Fanka. Waxaa aasaasay Count Ivan Shuvalov sanadkii 1757 iyadoo la adeegsanayo magaca Akadeemiyada ...
Waa maxay diinta ay sheegtaan dadka reer Cuba? Hagaag, sida waddan kasta oo uu gumeysto Isbaanishka, Katooliga ayaa si qoto dheer u dhex galay ...
Naadiyada dahabiga ah, cagaha adduunka ugu yar
Mid ka mid ah dhaqammada Shiinaha ee sida aadka ah ii soo jiitay ilmahaygii waxa loogu yeero "Bakhtiyaa-nasiibka Dahabiga ah", ee ...